मेरो उपचार खर्च म आफै बेहोर्छु, सरकारले जनताप्रतिको कर्तव्य पूरा गरोस् : डा. केसी
काठमाडौं। कोरोना संक्रमित भएका डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो उपचार खर्च आफै बेहोर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमण भएर शिक्षण अस्पताल महारजगंजको गणेशमान सिंह भवनमा भर्ना गरेर उपचार गरिरहेका डा. केसीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएपछि डा. केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो उपचार खर्च आफै बेहोर्ने तर सरकारले जनताप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक संजालमार्फत् डा. केसीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उनको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्योहोर्ने बताएका थिए। डा.केसीले भनेका छन्, ’ म कोभिड -१९ बाट संक्रमित भएपछि प्रम केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको स्वास्थलाभको शुभकामना सन्देशको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले मेरो उपचार खर्च बेहोर्छु भनेको सन्दर्भमा भने मेरो उपचार खर्च म आफैँ बेहोर्छु बरु सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य पूरा गरोस्।’
डा. केसीले अगाडी भनेका छन्, ’हामीसँग पटक पटक गरिएका सम्झौता कार्यन्वयन भएको भए देशका दूरदराजदेखि सबै भेगमा ठूला सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज बन्ने थिए। साथै, त्यहाँका नागरिकले कोरोना साथसाथै सम्पूर्ण रोगहरुको गुणस्तरीय, निःशुल्क, सर्वसुलभ स्वास्थ सेवा पाउने थिए।’
डा. केसीले आफूसँग १९औँ सत्याग्रहमा भएका सम्झौता यथाशीघ्र कार्यन्वयन गर्न अनुरोध गर्दै स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन्।